Fanjakàna hoy ianao? Fa iza no mpanjakantsika? - Vaovao farany
Home / fanjakàna / Hery Rajaonarimampianina / mpanjaka / Voahangy Rajaonarimampianina / Fanjakàna hoy ianao? Fa iza no mpanjakantsika?
Tenisany nga mbola taraiky any amin'ny faha-mpanjaka? Sa mbola mitoraka lefona sy manao salaka?
Efa tamin'ny taona 1917 i Madagasikara no tsy nanana mpanjaka intsony, Ranavalona III no mpanjaka farany teto. Dia mbola tompotompoinareo ihany izay mitondra eo kanefa ianareo ihany no nametraka azy teo, aiza moa izy no tsy hihevitra ny tenany ho toy ny mpanjaka.
Fanjakàna, fanjakàna, fanjakàna... Aok'izay! Fitondrana no izy:
Havaozy ny fomba fiteny raha te handroso.
© Sary : lachasse-info.com
Fanjakàna hoy ianao? Fa iza no mpanjakantsika? Reviewed on juillet 03, 2016 Rating: 5
fanjakàna X Hery Rajaonarimampianina X mpanjaka X Voahangy Rajaonarimampianina